Frontier Inotangisa Nonstop Belize Flights kubva kuDenver neOrlando
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Belize Breaking Nhau » Frontier Inotangisa Nonstop Belize Flights kubva kuDenver neOrlando
Airlines • nhandare yendege • Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Belize Tourism Board inoona kutanga kwebasa reFrontier Airlines kuBelize sekuwedzera kwakakosha mukubatana kwenyika dzenyika.
Ndege yekutanga ichasimuka Denver na8: 36 am uye inosvika muBelize na13: 44 pm.
Ndege yechipiri ichasimuka Orlando nenguva dza13: 42 masikati ndokusvika muBelize na15: 10 manheru. Ichasimuka Belize ichienda kuDenver nenguva dza16: 15 manheru uye yosvika na9: 40pm.
Iyo sevhisi, iyo inozopihwa pakutanga chete neMugovera, ichave yegore-rese pamwe nekwaniso yekuwedzera kukura mune ramangwana.
The Belize Tourism Board (BTB) inogamuchira chiziviso cheFrontier Airlines pakutanga kwebasa risingamire kuBelize kubva kuDenver, Colorado neOrlando, Florida kutanga muna Zvita 11, 2021. Iyo sevhisi, iyo inozopihwa pakutanga chete neMugovera, ichave yegore rese. ine mukana wekuwedzera kukura mune ramangwana.
Ndege yekutanga ichasimuka Denver na8: 36 am uye inosvika muBelize na13: 44 pm. Ndege iyoyo ichaenda kuBelize ichienda kuOrlando na14: 49 pm uye yosvika na18: 14pm. Ndege yechipiri ichasimuka Orlando nenguva dza13: 42 masikati ndokusvika muBelize na15: 10 manheru. Ichasimuka Belize ichienda kuDenver nenguva dza16: 15 manheru uye yosvika na9: 40pm.
"Tinofara kuzivisa basa kuBelize City kubva kumisika mikuru miviri yeUS: Denver neOrlando," akadaro Daniel Shurz, mutevedzeri wemutungamiri wezvekutengeserana, Airlines. "Tine tarisiro yekugamuchira vashanyi kuBelize vari mungarava yendege yeGreen kuti vaongorore nzvimbo yakasarudzika yemusango, mhuka dzesango uye zviitiko zvakazadzwa nezuva pamwe nevagari vemunharaunda vanotsvaga mafambiro anodhura kuenda kuUS"
Belize Tourism Board inoona kutanga kwebasa reFrontier Airlines kuBelize sekuwedzera kwakanyanya mukubatana kwenyika dzese sezvo ichizopa vashanyi vanobva kuWestern neSouth-Eastern United States mafambiro makuru ekufarira Belize senzvimbo yekutanga yezororo.
Kuyedza kweBelize yekuwedzera kubhururuka kwayo kwepasi rose kuri kutobhadhara. Mwedzi waMay wakanyoreswa 19,544 yehusiku vashanyi kuBelize nepo mwedzi waJune wakanyoreswa vashanyi 26,215. Nhamba dzeChikunguru dzinoenderera mberi nekufamba zvakanaka, izvo zvinoratidza kuti indasitiri yekushanya yeBelize iri munzira yekudzoka.